Himiladayada Dib-u-habeynta Socdaalka Federaalka: 9 Dalbo - Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > Maxaa kucusub CIRC > Himiladayada Dib-u-habeynta Socdaalka Federaalka: 9 Dalbo
Tani waa waqtigeenna si aan u abuurno isbeddel geesinimo leh, oo waara. Waa inaan u halganaa cadaalad dhamaan soogalootiga, dagaalkaasna waa inuu ku saleysnaadaa rajada iyo baahida bulshada soogalootiga ah ee Colorado. Anagoo la shaqeyneyna xubnaheena sida tooska ah saameyn ugu yeelaney, waxaan la nimid sagaal dalab oo ku saabsan cadaalada socdaalka:
In Jid Deg Deg ah loo siiyo Jinsiyadda dhammaan 11+ milyan oo Muhaajiriinta aan sharciga lahayn
Fursado waa in la siiyaa 11+ milyan ee qof ee ku nool Mareykanka iyagoon haysan dukumiinti sax ah si ay u kasbadaan sharci iyo marin u helaan waddaninimada. Dhacdooyinka dhalashada waa inaysan ka hor istaagin kuwa ka dhigay Mareykanka gurigooda inay helaan sharci rasmi ah. Barnaamij sharciyeyn lagu kasbaday oo loo dhan yahay, oo leh qorshe cad oo lagu fulinayo, waa in ay helaan dhammaan muhaajiriinta aan sharciyeysnayn ee hadda ku sugan Mareykanka.
Muhaajiriinta aan tirada lahayn, oo ay ku jiraan tiro badan oo magangalyo-doon ah oo lagu qasbay inay saxeexaan foomamka bixitaanka iskood ah, ayaa dib loogu masaafuriyey xaaladaha halista ah ee dalalkii ay ka tageen. Dhaqankan waa in si deg deg ah loo joojiyaa –– ma aha oo kaliya boqollaalka maalmood ee ugu horeeya, laakiin ilaa iyo inta laga badalayo nidaamkayaga soogalootiga ayaa hubinaya inaan qofna nidaamkaan laga dhici karin xuquuqdiisa aasaasiga ah, oo ay kujirto helitaanka wakiil sharci iyo maalin cadaalad ah maxkamada.
Jooji Xariga Gaarka ah
In kabadan 62,000 + dadka laxiray ayaa soo tabiyay xadgudubyo xaga xuquuqul insaanka ah intii udhaxaysay 2004 iyo 2018 xarunta Aurora GEO kaliya. Warar ayaa soo shaac baxay xilligan dayrta ee dumarka la marsiinayo qasabka ah - xadgudub argagax leh oo ka dhan ah xuquuqaha aasaasiga ah, iyo mid xiriir qoto dheer oo aan xasillooni lahayn la leh taariikhdeenna eugenics. Intaas waxaa sii dheer, inta lagu gudajiray cudurka faafa ee COVID-19, ciriiriga iyo xaaladaha nadaafad darrida ayaa halis ah. Xariggu wuxuu horey u cadeeyay xukun dil ah 21 muhaajiriin ah sanad maaliyadeedka 2020. Waa inaan ka fogaanno dhaqankan halista ah, ee bina-aadamnimada ka baxsan ee maxbuuska macaash doonka ah taa bedelkeedana aan dib u fikirno oo aan dhisno qaabab kale oo cusub oo ku saleysan qiyamka bani'aadamnimada.
Xaddid Awoodda ICE oo baadhitaan ku samee Hay'adda Xadgudubka Xuquuqda Aadanaha
Immigration and Customs Enforcement (ICE) waxay jirtay wax ka yar labaatan sano, waqtigaasna waxay muujisay tixgelin la'aan iyo qaddarin la'aanta xuquuqda aadanaha iyo sharciga. Hay'addu waxay samaysay hawlgallo intii lagu jiray xidhitaan buuxa bishii Maarso, iyadoo la fududeeyay faafitaanka COVID-19. Waxay diiday inay sii dayso qoysaska ku jira xabsiga muddadii loo qabtay oo amar maxkamadeed ku amartay. Waxay ka baxsatay inay wajaho eedeymaha xadgudubka iyada oo masaafurisay markhaati muhiim ah. Waxaan u baahanahay baaritaan dhameystiran oo ku saabsan ku takrifalkan awoodeed, iyo la xisaabtanka kuwa mas'uulka ka ah.
Gargaarka COVID ee Dhammaan
Muhaajiriinta aan sharciyeysnayn iyo qaatayaasha TPS iyo DACA waxay kujireen safafka hore ee safka safka, iyagoo sameynayay shaqooyin muhiim u ah beeraha, ilaalin, iyo caafimaad waxayna halis galisay caafimaadkooda howsha. In laga faa'iideysto hawsha xubnahan bulshada ka dibna laga saaro gargaarka dhaqaale waa cadaalad darro. Tan ugu muhiimsani, dadka aan sharciyeysnayn maahan oo keliya shaqaale lagama maarmaan ah laakiin sidoo kale waa lagama maarmaan xubnaha qoyska iyo bulshada, lagama maarmaanka u ah naftooda. Dariiqa kaliya ee aan uga gudbi karno dhibaatadan ayaa ah inaan hubinno in qof walba uu helo taageero caafimaad iyo mid dhaqaale oo uu u baahan yahay. Xaaladda socdaalku maahan inay gasho.
Ka ilaali DACA iyo Xaaladda La ilaaliyey ee Ku Meel Gaarka ah
Ilaa Koongarasku ka ansixinayo sharci siinaya waddo deeqsi ah muwaadinimada dadka aan haysan xaalad joogto ah, oo ay ku jiraan kuwa riyoonaya iyo kuwa haysta TPS, maamulku waa inuu abuuro barnaamijyo faa iidooyin ah oo dadka u oggolaanaya inay galaan dhaqaalaha caadiga ah, qorsheeyaan noloshooda iyagoo aan ka baqayn masaafurin lama filaan ah, iyo , xaalado badan, lagu gaaro sharci socdaal sharci ah. Tan waxaa ka mid ah ilaalinta DACA, u soo celinta TPS soogalootiga ka imanaya El Salvador, Haiti, Honduras, Nepal, Nicaragua, iyo Sudan, iyo sidoo kale ballaarinta TPS ilaa Guatemala, Venezuela, Mexico, iyo India iyadoo la tixraacayo dhibaatada ba'an ee ay dalalkan soo mareen. silica
Kuwii La Masaafuriyay Soo Keen
Maamulkani wuxuu fursad u leeyahay inuu sharfo mabaadi'da midnimada qoyska iyo fursadaha labaad iyadoo la dejinayo hannaan loogu talagalay shakhsiyaadka si aan caddaalad ahayn loogu masaafuriyo inay ku noqdaan guryahoodii ay halkan ka sameeyeen. Waxaan ka codsaneynaa maamulka Biden in ay dib u furaan ama ay u fidiyaan siidayn sharafeed bani'aadamnimo marka laga hadlayo meesha ka saarista xaqdarrada ah. DHS iyo DOJ waa inay yagleelaan hanaan isku dubaridan si loo hubiyo in codsiyada soo noqoshada si dhakhso leh loo xukumo iyo dhaqdhaqaaqyada dib loo furayo ayaa lagu xukumay waqti habboon, iyo ka-faa'iideystayaasha waxay ku laaban karaan Mareykanka si ay u sii wataan dacwaddooda, bulshadooda (oo aan la xirin) .
In Xudduudda Laga Qaado
Dadka deggan xadka Mareykanka iyo Mexico waxay ku nool yihiin xaalad bilays dalwad ah sababo la xiriira khalkhalgelinta iyo xeeladaha halista ah ee wakiilada Ilaalada Xuduudaha. Dhammaan dhaqamada dhaqangelinta ee dambi ka dhigaya ciqaabtana soogalootiga iyo xubnaha bulshada xuduudaha waa in la joojiyaa. Siyaasadda Ku Hadha Mexico waa in la dhammeeyaa, dhammaan qoysaska kala go'ay waa in dib loo mideeyaa, iyo in xuduudaha laga gudbo waa in la xukumaa.
Barnaamijka qaxootiga ee uu baabi'iyay maamulka Trump waa in si ballaaran loo ballaariyaa, iyadoo lala socdo dhammaan ardayda, shaqada, safarka, iyo fiisooyinka degganeyaasha.